Gibraltar ရှိ LLC တွင်အစုရှယ်ယာများဖြင့်ရှယ်ယာများကကုမ္ပဏီလီမိတက်ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း
Gibraltar တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ရှာဖွေနေပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည်။
Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန် Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကို Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Gibraltar ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Gibraltar ရှိ Offshore Company Registration နှင့် Gibraltar ရှိ Offshore Company များမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့ကိုလည်းထောက်ပံ့သည်။
Million Makers Gibraltar သည် Gibraltar နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက် Client များသို့အခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းကိုပေးသည်။
Gibraltar, Offshore Locations နှင့် Free Zone ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက် Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို Gibraltar မှကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။
လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့်ချက်ချင်းပင် Gibraltar အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းလျှောက်လွှာတင်သည်။
Gibraltar တွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသည် Gibraltar တွင်ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုရှိရန်လိုအပ်ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်သင်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်လိုအပ်ရင်။
Gibraltar တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက် Corporate စာရွက်စာတမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းပစ္စည်းများ (အမိန့်ပေးလျှင်) ပေးပို့ခြင်း။
သင်၏ Gibraltar နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်း၌ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။
Gibraltar နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့အတွက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဖြေရှာမှုများ၊ Gibraltar အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Gibraltar အတွက်ဘဏ်အကောင့်၊ Gibraltar အတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ Gibraltar အတွက် Virtual နံပါတ်၊ Gibraltar အတွက် CRM Solutions၊ Gibraltar အတွက် virtual office၊ နိုင်ငံများနှင့်အများကြီးပို။
နိဒါန်း Gibraltar ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်
ဂျီဘရောလ်၊ စပိန်၏မြေထဲပင်လယ်တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းကိုကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ထားသောမြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဂိုင်ဘရောလ်တာရေလက်ကြား၏အရှေ့ဘက်အမြင့်ဆုံး၊ ဂျီဘရောလ်တာပင်လယ်အော် (Algeciras ပင်လယ်အော်) ၏အရှေ့ဘက်ခြမ်းနှင့်စပိန်မက်ထရိုပိုလစ်၏တောင်ဘက်စွန်းတွင်တည်ရှိသည်။ ၃ မိုင် (၅ ကီလိုမီတာ) အရှည်ရှိပြီးသုည။ မိုင်ခုနစ်ဆယ်ငါးမိုင် (၁.၂ ကီလိုမီတာ) ကျယ်ပြန့်ပြီးစတုရန်းမိုင်သည် (၁) မိုင် (၁.၆ ကီလိုမီတာ) အနိမ့်သဲသန္တာန်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဆက်စပ်သည်။ ၁၈ ရာစုကတည်းကဂျီဘရောလ်တာသည်ဗြိတိသျှရေကြောင်းပထမတန်းစား၏ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်ခဲ့ပြီး၎င်းကျောက်ကို“ ကျောက်” ဟုမကြာခဏရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ ၁၈၆၉ ခုနှစ်တွင်စူးအက်တူးမြောင်းစတင်ခြင်းနှင့်အတူဂျီဘရောလ်တာသည်အလွန်အရေးပါသောအရာအဖြစ်များပြားလာခဲ့ပြီးယာယီဆိပ်ကမ်းတစ်ခုအဖြစ်အရှိန်အဟုန်မြင့်မားလာသည်နှင့်အမျှ၎င်း၏အခြေအနေများမှာလည်းတိုးတက်ခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကတည်းကဗြိတိသျှရေတပ်နှင့်ရေကြောင်းသင်္ဘောကျင်းများသည်ဂျီဘရောလ်တာစီးပွားရေး၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးမြောက်အတ္တလန္တိတ်စာချုပ်အဖွဲ့ (နေတိုး) ၏ရေကြောင်းအားကစားများသည်ဆိပ်ကမ်းအလုပ်များကိုပုံမှန်အသုံးပြုသည်။
ဂျီဘရောလ်တွင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အခြေခံကျပြီးအခြားအီးယူ၏ရည်မှန်းချက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည့်အချက်အလတ်များစွာရှိသည်။ Gibraltar တွင်အဖွဲ့အစည်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ Gibraltar တွင်နေထိုင်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဆိုလိုသည်မှာ Gibraltar အတွင်းမှအမှန်တကယ်ဖလှယ်နေသောအဖွဲ့အစည်းများသည်သူတို့၏အကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ၁၀% ပေးဆောင်ရန်ကတိကဝတ်ပြုထားကြသည်။
ဂျီဘရောလ်သည် VAT ဇုန်၏အပြင်ဘက်တွင်ရှိပြီးမြို့တော်ငွေတိုးရန်မလိုပါ။ Gibraltar အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုပေါင်းစည်းခြင်းမပြုမီကမ်းလှမ်းမှုအရင်းအနှီးကိုပေးဆပ်ရန်ကတိကဝတ်မရှိပါ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ၁ ဦး နှင့်အကြီးအကဲ ၁ ဦး သာလိုအပ်သည် (၎င်းတို့သည်အလားတူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး သို့မဟုတ်ဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်) ။
ထို့အပြင်ဂျီဘရောလ်ရွေးချယ်ထားသည့်အုပ်ချုပ်ရေးတစ်ခုစဉ်းစားသည်။ အတွင်းရေးမှူးနှင့် Trustee ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအပြည့်အ ၀ ကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းတန်ဖိုးကိုမှတ်မိနေသည့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကိုအပြည့်အဝကမ်းလှမ်းသည်၊ ၎င်းသည်အသုံးဝင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အား ၄ င်းတို့အဖွဲ့အစည်းကိုသီးသန့်စီမံခွင့်ရှိသည်။ သတိပြုရမည်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်သည်အဖွဲ့အစည်း၏ဘဏ္balanceာရေးဟန်ချက်ကိုအဓိကလက်မှတ်ရေးထိုးလိမ့်မည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအပြုသဘောအဘယ်သူမျှမဝင်ပေါက်ရှိသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလပထမအရဂျီဘရောလ်အဖွဲ့အစည်းများသည်အခွန်အချက်အလက်များနံပါတ် (TIN) လိုအပ်သည် - ၎င်းကိုဂစ်ဘရောလ်အဖွဲ့၏အစုအဝေးအတွက်သတိရပြီးဘဏ္balanceာရေးဟန်ချက်ကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
Gibraltar အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည်တစ်နေ့တည်းအလျင်အမြန်စုစည်းနိုင်ပြီးအစပိုင်းမှသတ်မှတ်ထားသောဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကိုပေးသည်။ အမြန်နှုန်းကိုတိုးသည်။ စံပေါင်းစည်းရေး 3-5 အလုပ်လုပ်ရက်ပေါင်းကြာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အနိမ့်အစုအဝေးကုန်ကျစရိတ်အဖွဲ့အစည်း၏စာရင်းသွင်း, အဖွဲ့အစည်းမှတ်တမ်းများ, တစ်နှစ်စာရင်းသွင်းရုံးလိပ်စာ, လိုအပ်သောအခါတိုင်းမေးလ်စာပေးစာယူဘို့ဗြိတိန်သို့မဟုတ် Gibraltar လိပ်စာ, တစ်နှစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကော်ပိုရေးရှင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဘဏ်တင်ပြချက်။
တစ်ခါတစ်ရံတစ် ဦး ချင်းစီသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အခြားဒေသများထက်အတန်အသင့်အတန်အသင့်နည်းသောထိုဒေသများတွင်အဖွဲ့အစည်းများတည်ထောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ကြလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစိတ်ထားဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့ဝယ်ယူသည့်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုကုန်ကျစရိတ်သည်သိသာထင်ရှားသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူယနေ့ခေတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များသည်လွယ်ကူသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်စျေးကြီးသောငွေကြေးချိန်ခွင်လျှာအခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်စေမည့်အဓိက ဦး စားပေးအဖြစ်ခံနိုင်ရည်ရှိရန်လိုအပ်သည်။ Gibraltar သည်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေသည့်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ဟန်ချက်ညီညီမျှမှုကိုရှာဖွေရန်အတွက်လျောက်ပတ်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် - Gibraltar၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ Gibraltar တွင်စတင်ခြင်းနှင့် Gibraltar သို့မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ ခုတွင် setup business အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်တစ်နေရာတည်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
Gibraltar ရှိ Company Incorporation ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည် Gibraltar ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းမှစီးပွားရေးအဖြေများအားအဆုံးသတ်ရန်နှင့် Gibraltar ရှိသင်၏နေရာလွတ်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွမ်းကျင်သောနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုငှားရမ်းရန်ကူညီခြင်း၊ Gibraltar ရှိ virtual office၊ Gibraltar ရှိ virtual office၊ Gibraltar ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဝယ်ယူခြင်း၊ virtual နံပါတ် Gibraltar၊ Gibraltar တွင်စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်း၊ Gibraltar ရှိတရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Gibraltar မှဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Gibraltar ရှိစီးပွားရေးဆိုင်ရာတန်ဖိုး၊ Gibraltar ရှိ CRM Solutions၊ Gibraltar ၏ကုန်သည်စာရင်းသို့မဟုတ်ငွေပေးချေရေးဂိတ် Gibraltar၊ Gibraltar တွင် Web development၊ Gibraltar ရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ Gibraltar ရှိ Ecommerce Development၊ Gibraltar ရှိ Apps များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ Gibraltar ရှိ software များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ Gibraltar ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ စျေးနှုန်းချိုသာပြီးဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဖော်ပြခြင်း။
ဂျီဘရောလ်တွင်တည်ထောင်ပြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီများအတွက် - Gibraltar နှင့် Offshore ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Gibraltar မှ offshore bank account အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်အဆုံးမှအဆုံးသတ်ဖြေရှင်းချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။ Gibraltar သို့မဟုတ်သင်၏နိုင်ငံတကာနေရာများတွင် Gibraltar ရှိစိတ်ကြိုက် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအရည်အချင်းပြည့်မှီသောအရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းများငှားရမ်းရာတွင်ကူညီသည်။ Gibraltar ရှိစီးပွားရေးရောင်းအားနှင့် ၀ ယ်ခြင်း၊ Gibraltar တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Gibraltar ရှိ virtual နံပါတ်များ၊ Gibraltar တွင်နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့ခြင်း၊ Gibraltar ရှိတရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Gibraltar ရှိစီးပွားရေးအတွက်စီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ Gibraltar မှဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Gibraltar CRM Solutions၊ Merchant account နှင့် payment gateway Gibraltar, Gibraltar အတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများငွေကြေးနှင့် Gibraltar အတွက်လည်ပတ်ငွေကြေးအရင်းအနှီး, Gibraltar အတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့်လိုက်နာမှု, Gibraltar အတွက် Web ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, Gibraltar အတွက် Web ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, Gibraltar အတွက် Ecommerce ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, Gibraltar အတွက် Apps ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, Gibraltar အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, Gibraltar အတွက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှင့် Blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ အလွန်ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများမှာအနည်းငယ်အမည်ကို Gibraltar ၌တည်၏။
Gibraltar ရှိအစုရှယ်ယာများက Private Limited အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်ကုန်ကျစရိတ်
Gibraltar အတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ ဂျီဘရောလ်အတွက်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာဂိုင်ဘရောလ်နဲ့ကမ္ဘာ ၁၀၉ နိုင်ငံမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးပေးပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာဝန်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှမပေးနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဟာဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာအကြီးမားဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲကတစ်ယောက်လို့ပြောရင်မှန်တယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ စီးပွားရေးအကျယ်အပြန့်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Gibraltar တွင်အကောင်းဆုံးသောစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုတတ်နိုင်သောဈေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။ WE Gibraltar အတွက်အဖြေတစ်ခုပေးသည်။
Gibraltar ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် Gibraltar ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုစာရင်းကိုင်များကသင့်ကိုလမ်းပြလိမ့်မည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဂျီဘရောလ် (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဂျီဘရောလ် (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဂျီဘရောလ်
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဂျီဘရောလ်
Gibraltar BUSINESS COMPANY အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုကြေး
Gibraltar ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
Gibraltar ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ Gibraltar အတွက် Chop and Seal
●အစုရှယ်ယာများဂျီဘရောလ် (ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်) မှပုဂ္ဂလိကလီမိတက်အတွက် ၀ န်ဆောင်ခခ - ၈၂၀ ဒေါ်လာ
● Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုခ - ဒေါ်လာ ၈၀၀
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီ TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားအမည် ၃ ခုပေးပါ)
● Gibraltar ရှိအစုရှယ်ယာများကပုဂ္ဂလိကလီမိတက်အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်တင်သွင်းခြင်း
● Gibraltar ရှိအစုရှယ်ယာများက Private Limited အတွက်ကုမ္ပဏီ၏အတွင်းရေးမှူးကိုတစ်နှစ်ခန့်အပ်နှံရန်
● Gibraltar ရှိအစုရှယ်ယာများက Private လီမိတက်အတွက်သင်၏လီမိတက်အတွက်ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းတွင်အသင်း ၀ င်စာချွန်လွှာနှင့်အသင်း ၀ င်မှုများ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အစုရှယ်ယာလက်မှတ်များ၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
Gibraltar တွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်၊ ဒေသအရင်းအမြစ်များကိုသင်နှင့်နီးစပ်စေရန်အခမဲ့အကြံပေးသည်။ သင် Gibraltar သို့မဟုတ် ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးစတင်ချင်လျှင်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။
Shares Gibraltar မှပုဂ္ဂလိကလီမိတက်အတွက် Merchant Account
အစုရှယ်ယာဂျီဘရောလ်မှပုဂ္ဂလိကလီမိတက်အတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
ရှယ်ယာများကပုဂ္ဂလိကလီမိတက်အတွက်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
အစုရှယ်ယာများကပုဂ္ဂလိကလီမိတက်အတွက်ကုမ္ပဏီ Chop နှင့်တံဆိပ်ခတ်
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ Gibraltar ၌ Million Makers မှတဆင့်
သင်သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို Gibraltar တွင်မှတ်ပုံတင်လိုပါက Gibraltar ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Gibraltar ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကိုမည်သို့မည်ပုံမှတ်ပုံတင်မည်နည်း။ Gibraltar ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည် Gibraltar ရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Gibraltar ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ Gibraltar ၌ရှိသောဖောက်သည်များနှင့် Gibraltar အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၏နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ရက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူအနေဖြင့်၊ Gibraltar တွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်သင့်ကုမ္ပဏီများအတွက် Gibraltar မှ offshore ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ငါတို့မှတဆင့်ဂျီဘရောလ်။ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကို Gibraltar တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ သင်လျှောက်ထားလိုပါက Gibraltar အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့သောသင်နှင့်သင်၏မိသားစုအတွက် Gibraltar အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုလည်းသင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ အဘို့ ဂျီဘရောလ်နေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
Gibraltar ရှိလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများအဖွဲ့သည် Gibraltar ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသောဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ ဂျီဘရောလ် ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် ဂျီဘရောလ်.
Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Gibraltar ရှိ Company Incoporation နှင့် Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
Gibraltar ၌ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုကြောင့် Gibraltar ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Gibraltar ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ Gibraltar ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများနှင့်သင်၏ Gibraltar ရှိအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအကြံပေးများနှင့်အတူ Gibraltar တွင်တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဖြေရှင်းချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။
Gibraltar တွင်ရှယ်ယာများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့် Private Limited အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများ - Gibraltar တွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း
Gibraltar အပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူမှပင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အမြားကိုကျွန်ုပ်တို့ Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။ Gibraltar နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတို့တွင်စီးပွားရေးအဖြေများမှအစအဆုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးပေးနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုဆိုလျှင်မှန်ကန်ပေလိမ့်မည်။ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်“ Gibraltar ရှိအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ” ကိုစျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။
WE Gibraltar အတွက်အဖြေတစ်ခုပေးသည်။
Gibraltar ရှိ LLC မှအစုရှယ်ယာများက Private Limited အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုတွင် -
မှတ်ပုံတင်တွင် Gibraltar အတွက်ကုမ္ပဏီအမည်ရှာဖွေပါ။
Gibraltar အတွက်ရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်း ၀ င်များကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
Gibraltar ရှိ LLC မှအစုရှယ်ယာများကပုဂ္ဂလိကလီမိတက်အတွက်အသင်း၏စာချွန်လွှာနှင့်စာတမ်းများ။
Gibraltar / LLC ရှိအစုရှယ်ယာများက Private Limited ကိုရှယ်ယာများကရှယ်ယာခွဲဝေမှုလက်မှတ်ကိုဂျီဘရောလ်တာစာအုပ်၊
Gibraltar ၌မှတ်ပုံတင်ထားသောအစုရှယ်ယာများက Private Limited တွင်အစုရှယ်ယာရှင်လီမိတက်အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလက်မှတ်။
Gibraltar ရှိ LLC တွင်အစုရှယ်ယာများက Private Limited ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါကမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။
မှတ်ပုံတင်ရုံး, မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ခဲ့လျှင်, Gibraltar အတွက် Gibraltar / LLC ရှိအစုရှယ်ယာများကပုဂ္ဂလိကလီမိတက်။
Gibraltar ရှိ LLC အစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းတွင် Private Limited မှ Private Limited အတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ Gibraltar ရှိ Gibraltar / LLC ရှိအစုရှယ်ယာများက Private Limited ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: သင်သည် Gibraltar တွင်လိုင်စင်မရှိဘဲလှုပ်ရှားမှုကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း (သို့) သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်မှပေးသော Gibraltar တွင်ခွင့်ပြုချက်ရယူပါက Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့သည် Gibraltar ရှိဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်လိုင်စင်မရသောလုပ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောသင့်အားကူညီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်: Gaming, လောင်းကစား, ထီ, Gibraltar အတွက်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုအတွက်ကုန်သွယ် / ပွဲစား, Gibraltar အတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း, Gibraltar အတွက်အာမခံစီးပွားရေး, ဘဏ္financialာရေးနှင့်ကုန်စည်အခြေခံပြီးဆင်းသက်လာတူရိယာများနှင့် Gibraltar အတွက်အခြားအာမခံ, Gibraltar အတွက်ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းများ, ပိုက်ဆံ Gibraltar တွင်အပြန်အလှန်ဖလှယ်ခြင်း၊
Gibraltar ရှိ Crytocurrency လိုင်စင်၊ Forex အကျိုးဆောင်သို့မဟုတ် Gibraltar ရှိလောင်းကစားခွင့်လိုင်စင်အတွက်မည်သည့်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
ဂျီဘရောလ်နှင့်ကုမ္ပဏီပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအပါအ ၀ င်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၅၀ တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
Gibraltar တွင်ပြုလုပ်သူသန်းနှင့်ချီသောကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်များနှင့် Gibraltar ရှိ Professional CFA၊ Gibraltar ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Gibraltar ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ Gibraltar ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများ၊ Gibraltar ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးများမှတစ်ဆင့်။
ကျနော်တို့ Gibraltar အတွက်တစ် ဦး ချင်းအခွန်ထမ်းနှင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Gibraltar အတွက်ကြီးမားတဲ့အစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲ။
Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဂလူဘရောလ်၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Gibraltar ရှိကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံရှိဖောက်သည်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။
ဂျီဘရောလ်ရှိ Corporate Services | Buena Vista ရှိ Corporate Services
Gibraltar ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Gibraltar ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Gibraltar ရှိ Corporate အတိုင်ပင်ခံများ၊ Gibraltar တွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက် Gibraltar တွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ၊ Gibraltar တွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ၊ Gibraltar ရှိကော်ပိုရေးရှင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက် Gibraltar ရှိကုမ္ပဏီများ Gibraltar တွင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Gibraltar ရှိကုမ္ပဏီများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက် Gibraltar တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Gibraltar ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Gibraltar ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် Gibraltar ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ
ဂျီဘရောလ်ရှိ Corporate အတိုင်ပင်ခံ | Buena Vista ရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ
ဂျီဘရောလ်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် Gibraltar တွင်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ပါ။
သင်၏ကုမ္ပဏီ Gibraltar တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် ဂျီဘရောလ်.
ဂျီဘရောလ်ရှိ Accounts Outsourcing
သင်၏ကုမ္ပဏီသည် Gibraltar တွင်သင်ချိတ်ဆက်နိုင်သည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို ဂျီဘရောလ်၌တည်၏။
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဝယ်ယူပါ Gibraltar တွင် Gibraltar ရှိကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာများကိုဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ် Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝယ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။
HR အတိုင်ပင်ခံ Gibraltar တွင်ပေးအပ်ထားသည့်အရာသည်သင်၏ HR လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ၀ န်ထုပ် ၀ န်ထမ်းများအားဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ Gibraltar ရှိအဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ Gibraltar နှင့် US အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၇ နိုင်ငံ၊အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းGibraltar ၌တည်၏
Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်၌အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ ဂျီဘရောလ်.
ဂျီဘရောလ်အတွက် Cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် Gibraltar မှကမ်းလွန်သို့မဟုတ် EU တရားစီရင်မှုများအတွက်။
ဂျီဘရောလ်အတွက် CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ Gibraltar ရှိသင်၏ဖောက်သည်များ၏ဆက်သွယ်မှုနှင့်အထောက်အပံ့ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်စေရန်ကူညီသည်။
Virtual Number - Gibraltar အတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် Gibraltar ရှိစီးပွားရေး VoIP အပါအဝင် Gibraltar ရှိ VoIP ဖြေရှင်းချက်များ၊ Gibraltar ရှိ VoIP ဖြေရှင်းချက်များ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံအတွက်ဂျီဘရောလ်မှဖြစ်သည်
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း ဂျီဘရောလ် Gibraltar တွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ $ 100 နှင့်အတူစတင်
Gibraltar ရှိ Software Development ကုမ္ပဏီ
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဂျီဘရောလ်, Gibraltar ရှိ CryptoCurrency Software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် Gibraltar ရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
ဂျီဘရောလ်ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောဆော့ဝဲလ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ Gibraltar ရှိစျေးသက်သာသောစီးပွားကူးသန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် Gibraltar တွင်မြန်ဆန်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုထောက်ခံရန်နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်မှုနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် Gibraltar တွင်ပါ ၀ င်ရန်လိုက်နာရမည့် Gibraltar သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်စဉ်များကိုလျင်မြန်စွာလိုက်နာခြင်း။ ဂစ်ဘရောတာရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖောက်သည်၏ကြိုက်နှစ်သက်သောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်နေရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများကြွယ်ဝခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်၎င်းတို့ကိုမကူညီနိုင်သည့်အရာများအပေါ်ရိုးသားစွာဖြင့်ဂစ်ဘရောလ်တာတွင်သူတို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်ကြသည်။
Gibraltar တွင်နေထိုင်သူများနှင့် Gibraltar ရှိအစုရှယ်ယာများဖွဲ့စည်းခြင်းအားဖြင့်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ရှိနိုင်ငံခြားသားများကို Gibraltar ရှိအစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းအားဖြင့်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်၊ ဂိုင်ဘရောလ်ရှိရှယ်ယာများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်၊ Gibraltar ရှိရှယ်ယာများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Gibraltar တွင်အစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်၊ ဂိုင်ဘရောလ်တွင်အစုရှယ်ယာများထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှအစုရှယ်ယာများဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် Gibraltar ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်၊ အစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့် Gibraltar ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်၊ အစုရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့် Gibraltar ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်၊ ရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းအားဖြင့်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်။
Gibraltar တွင်အစုရှယ်ယာများထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် Private Limited အားအထောက်အပံ့ပေးသည် ဂျီဘရောလ်တွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း | ဂျီဘရောလ်အတွက် IBC ပေါင်းစည်းမှု | ဂျီဘရောလ်တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း ဂျီဘရောလ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | ဂျီဘရောလ်တွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | ဂျီဘရောလ်ရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
Gibraltar တွင်နေထိုင်သူများနှင့် Gibraltar တွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများအားလည်း Gibraltar တွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Gibraltar တွင်ထည့်သွင်းခြင်း LLC၊ Gibraltar ရှိ Offshore LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Gibraltar ရှိ Offshore LLC တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Gibraltar ရှိ Offshore LLC တွင်ပါဝင်ခြင်း၊ , Gibraltar LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Gibraltar LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, Gibraltar LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, Gibraltar Offshore LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Gibraltar Offshore LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Gibraltar တွင်နေထိုင်သူများနှင့် Gibraltar ရှိ IBC ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကို Gibraltar တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Gibraltar တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Gibraltar ရှိ IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Gibraltar ရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Gibraltar ရှိ IBC တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Gibraltar IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Gibraltar IBC Registration, Gibraltar IBC incorporation, Gibraltar Offshore IBC Formation, Gibraltar Offshore IBC Registration ။
Gibraltar တွင်နေထိုင်သူများနှင့် Gibraltar ရှိ Business Company ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကို Gibraltar တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Gibraltar တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော Business Company၊ Gibraltar ရှိ Offshore Business Company ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Gibraltar ရှိ Offshore Business Company များမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ Gibraltar စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Gibraltar စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Gibraltar စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Gibraltar Offshore Business Company ဖွဲ့စည်းခြင်း, Gibraltar Offshore Business Company Registration ။
ကျနော်တို့ Gibraltar တွင်နေထိုင်သူများနှင့် Gibraltar တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများ, ကိုလည်းခေါ်, Gibraltar အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်, Gibraltar အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်, Gibraltar အတွက်ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်း, Gibraltar အတွက်ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်, ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ Gibraltar အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Gibraltar အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Gibraltar အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Gibraltar ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Gibraltar Offshore International Company Registration ။
Gibraltar တွင်နေထိုင်သူများနှင့် Gibraltar တွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ Gibraltar တွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Gibraltar တွင် LLC ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ Gibraltar ရှိ Offshore LLC ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ Gibraltar, Offshore LLC တွင်ရှိသော Offshore LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။ Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Gibraltar LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Gibraltar LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Gibraltar LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Gibraltar Offshore LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, Gibraltar Offshore LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Gibraltar ရှိဒေသခံများနှင့် Gibraltar ရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကို Gibraltar တွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Gibraltar တွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Gibraltar ရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Gibraltar ရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ Gibraltar IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Gibraltar IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Gibraltar IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, Gibraltar Offshore IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, Gibraltar Offshore IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Gibraltar ရှိအစုရှယ်ယာများအားဖြင့်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ Gibraltar တွင် LLC မှတ်ပုံတင်ပါ IBC ကိုဂျီဘရောလ်တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ Gibraltar ရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဂျီဘရောလ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ Gibraltar တွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ ဂျီဘရောလ်ရှိ IBC ကုမ္ပဏီကိုမှတ်ပုံတင်ပါ
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများအား Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုဂိုင်ဘရောလ်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Gibraltar မှ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Gibraltar မှ Offshore ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ Gibraltar တွင်အထောက်အပံ့များမှာ Buena Vista တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Buena Vista တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Buena Vista မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Buena Vista မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Buena Vista မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
Gibraltar တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Buena Vista တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းသည် Gibraltar ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် Gibraltar ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်များသည်မြို့ကြီးများရှိ Buena Vista ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအေးဂျင့်များအားကျွန်ုပ်တို့ကူညီပံ့ပိုးသည်။ Buena Vista တွင် Buena Vista ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Buena Vista ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ၊ Buena Vista ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Buena Vista ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
Gibraltar တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Buena Vista တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ
Gibraltar မှတတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ဂိုင်ဘရောတာ၌စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဂစ်ဘရောလ်တာရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဂိုင်ဘရောလ်မှာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Buena Vista တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Buena Vista ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Buena Vista ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Buena Vista ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Buena Vista ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ။
Gibraltar တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Buena Vista တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ
Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ Gibraltar တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်၊ Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Gibraltar တွင် setup ကုမ္ပဏီ၊ Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Buena Vista တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ၊ Buena Vista တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ၊ Buena Vista တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းပါ၊ Buena Vista တွင်တည်ဆောက်သည့်ကုမ္ပဏီ၊ Buena Vista တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်မည်၊ Buena Vista တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်မည်။
Gibraltar တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ Buena Vista တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှု
Gibraltar တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Gibraltar တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Gibraltar တွင်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Gibraltar တွင်ဘဏ်စာရင်းရှိနိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားအား Buena Vista ရှိကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်၊ , Buena Vista တွင်နိုင်ငံခြားသားအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်, ဘဏ်အကောင့်နှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများအတွက် Buena Vista တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Gibraltar | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Buena Vista
Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် Gibraltar တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ Gibraltar တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျမှု၊ Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီကုန်ကျသည် Gibraltar တွင်ကုန်ကျသည်။
Gibraltar ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး Buena Vista ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး
Gibraltar တွင်နိုင်ငံခြားကုမ္မဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် (သို့) Gibraltar တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။
Gibraltar တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးစတင်ရန် (သို့) Gibraltar တွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် (Gibraltar) တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ထောင်ရန် Gibraltar တွင်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်အချို့ရှိသည်။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
Gibraltar တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု Buena Vista တွင်ထည့်သွင်းပါ
Gibraltar ရှိရှယ်ယာများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့် Private Limited နှင့်သင်အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသလား ဂျီဘရောလ်တွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဂျီဘရောလ်ရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဂျီဘရောလ်တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဂျီဘရောလ်တွင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဂျီဘရောလ်တွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဂျီဘရောလ်ရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း?
Gibraltar ရှိအစုရှယ်ယာများကပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကိုပေါင်းထည့်ပါ။ | ဂျီဘရောလ်တွင် LLC ထည့်သွင်းပါ IBC ကိုဂျီဘရောလ်တွင်ထည့်သွင်းပါ ဂျီဘရောလ်ရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ ဂျီဘရောလ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းပါ Gibraltar ရှိ LLC ကုမ္ပဏီ ဂျီဘရောလ်ရှိ IBC ကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ
Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Gibraltar တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအကြားမည်သို့ခြားနားသနည်း။
Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း (Gibraltar) တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း (Gibraltar) တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း (Gibraltar) တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ကွဲပြားခြားနားခြင်းမရှိဟုသုံးစွဲသူများကမေးလေ့ရှိသောဤအခြေခံမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်အတွက်၎င်းတို့သည်ကုမ္ပဏီတွင်အသုံးပြုသောစကားလုံးများဖြစ်သည်။
ဂျီဘရောလ်ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစု ၀ န်ဆောင်မှုများ Gibraltar ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်း Gibraltar ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
သင်၏ကုမ္ပဏီကုပ္မဏီ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဂစ်ဘရောလ်တွင်လည်းကောင်း၊
Gibraltar ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ Company Incorporation အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာထူးချွန်မှုများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ ဂစ်ဘရောလ်တာရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအမြောက်အများနှင့်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းစာရင်းများကြောင့် Gibraltar ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ Gibraltar နှင့် Gibraltar ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများက Gibraltar ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ Gibraltar ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ | Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ
နေထိုင်သူများမဟုတ်သောနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ဂျီဘရောလ်ရှိအထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
Buena Vista တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င် Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအားအထူးကူညီထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ သင်ဟာနိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Gibraltar မှာကုမ္ပဏီဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊
Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန် (သို့) Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါက၊ Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ Gibraltar တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်။ Gibraltar တွင်အလားတူပင် Buena Vista တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Buena Vista တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Buena Vista တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းရန်သို့မဟုတ် Buena Vista တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Buena Vista တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Buena တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်အတွက် Vista, Buena Vista တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
Gibraltar တွင်ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Buena Vista တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
ယုံကြည်စိတ်ချရသော Novus ဘဏ်
စင်ကာပူနိုင်ငံ Kleinwort Hambros Bank (ဂျီဘရောလ်) လီမိတက်
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ဂိုင်ဘရောတာ၌မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုများမှငွေကြေးခဝါချမှုကိုလုံးဝဆန့်ကျင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောလူများကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ ဂျီဘရောလ် အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
Gibraltar အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
● Gibraltar အတွက်ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုများသည်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းပစ္စယများသို့မဟုတ် Gibraltar မှသို့မဟုတ်သို့သို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းများသူလျှိုများအတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။
● Gibraltar အတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကို Gibraltar ၏ဥပဒေအရအနက်ရောင်စာရင်းဝင်သည့်တရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ဂျီဘရောလ်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဂျီဘရောလ်မှသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
● Gibraltar အတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာနှင့်ဂိုင်ဘရောလ်တာတွင်ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများသည်ဂိုင်ဘရောလ်တာရှိကုမ္ပဏီများသို့လည်းကောင်း၊ ကုမ္ပဏီများမှလည်းကောင်း၊ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်း။
●လူနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်မဆိုဂျီဘရောလ်တာထဲမှသို့မဟုတ်သို့ဖြစ်သည့် Gibraltar အတွက် Gibraltar အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
● Gibraltar အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မွေးစားခြင်းအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါ၊ အငြင်းပွားဖွယ်မိဘအုပ်ထိန်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ် Gibraltar မှသို့မဟုတ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားမှုပုံစံများအပါအ ၀ င်။
●ဂျီဘရောလ်အတွက်ကုမ္မဏီနှင့်သက်ဆိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဘာသာရေးထုံးတမ်းများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများကိုဂျီဘရောလ်မှလည်းကောင်း၊
●ဂျီဘရောလ်အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းစာပေများကိုအခြေခံသောဂျီဘရောလ်နှင့်ဆိုင်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
● Gibraltar အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည် Pyramid အရောင်းတွင်လုပ်ကိုင်နေသော Gibraltar မှသို့မဟုတ်သို့ဖြစ်သည့်တစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသည်မဟုတ်။
● Gibraltar အတွက်ကုမ္ပဏီ၏ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက် Gibraltar သို့ဖြစ်စေ၊
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် ဂျီဘရောလ်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် ဂျီဘရောလ်, ဂျီဘရောလ် ဘဏ်အကောင့်, ဂျီဘရောလ် ယုံကြည်မှု ဂျီဘရောလ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု ဂျီဘရောလ်။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ ဂျီဘရောလ်ဘို့
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-gibraltar/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-gibraltar/